Cessna Citation Excel XLS + FSX & P3D / ndege ailerons vasiri kushanda zvakanaka
mubvunzo Cessna Citation Excel XLS + FSX & P3D / ndege ailerons vasiri kushanda zvakanaka
1 gore 8 ago #648 by julian1245
Hello Rikoooo ndinoda kukubvunza vakomana pamusoro ndege iyi. Ndiri kuda ndege iyi MFSXS uye zvikuru asi wokwaEfremu vaicherechedza dambudziko pamwe ndege kuti zvinonyanya kunetsa ini. Zviri glitch pamwe ailerons apo paunenge kutendeukira Vakafanana spazz kunze. Ndege kwaanoda asi anotarisa musoro ini achidzungaira kana iwe waigona, kubudikidza chero mukana, vane Anotarira kuchigadzira pamwe akafanana yoku- shanduro kana chinhu ndingadai zvechokwadi kana kwakanga parumananzombe nokuti wokwaEfremu uchinakidzwa kwazvo ndege. Im asina chokwadi kana chimwe chinhu chete mutambo kana kana wokwaEfremu kuita chinhu chakaipa kana wokwaEfremu achiiisa.
Thanks kundizivisa kana uine chero pfungwa.
Time chokusika peji: 0.257 mumasekonzi